Atsaharo ny orinasa manala baraka izay miasa amin'ny media sosialy sy ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Alarobia, Aprily 10, 2019 Alarobia, Aprily 10, 2019 Douglas Karr
Nahita lamina iray aho tamin'ny taon-dasa izay inoako fa tena manelingelina… ny henatr'ireo orinasa ataon'ny mpitondra hajaina eo amin'ny sehatry ny varotra rehefa manapa-kevitra ny hampihena na hanova ny paikadim-baovaon'izy ireo na ny paikadin'ny votoatiny izy ireo.
Leo be aho izao.
Ity misy fanavaozana vao haingana tao amin'ny Twitter avy any LUSH UK izay manao asa tsy mampino amin'ny famaritana ny fanambin'izy ireo amin'ny maha-orinasa sy ny fomba hamalian'izy ireo izany. Azafady tsindrio ary vakio ny rojo fanavaozana rehetra.
Miova sosialy izahay.
Mihabetsaka, ny haino aman-jery sosialy dia manasarotra ny fifampiresahantsika mivantana. Reraka izahay miady amin'ny algorithma, ary tsy te handoa vola izahay hiseho amin'ny newsfeed anao. pic.twitter.com/nJUzG0lham
- LUSH UK (@LushLtd) Aprily 8, 2019
Aza mijanona eo anefa. Vakio ny kofehy feno fandinihana. Vakio avy eo ny fomba marketing mpitarika mamaly. Heveriko fa ny fanakianana sy ny valiny ratsy dia tsy fandraisana andraikitra fotsiny, manao tsirambina tanteraka izy ireo.
Ireo mpivarotra media sosialy sy atiny mivarotra haino aman-jery sosialy sy atiny. Tsara ho azy ireo, saingy tsy midika izany fa miasa ho an'ny orinasa tsirairay ny paikadin'izy ireo. Tsy izany.
Toy ny hoe ny haino aman-jery sosialy sy ny marketing amin'ny atiny no menaka CBD ao amin'ny indostrian'ny marketing… ny fanafody amin'ny aretina rehetra izay misy fiantraikany amin'ny orinasanao. Tsy izany ry zareo.
Izaho no CMO hanakarama ho an'ny orinasa maro. Niara-niasa tamin'ny olona rehetra avy amin'ny GoDaddy, Dell, ary Chase aho hatrany amin'ireo orinasa mifehy ny pest sy ny tafo. Ho an'ny orinasa sasany, ny paikady matanjaka eo amin'ny lafiny sosialy sy ny atiny dia nisy dikany ara-toekarena tena tsara. Ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy fifandraisana amin'ny mpihaino na vondrom-piarahamonina marobe ananany dia mahafinaritra.
Saingy tsy ny orinasa rehetra izany.
Ity misy fahagagana ho anao. Iray amin'ireo orinasa ireo aho.
Ny paikady atiny sy paikady sosialy dia ahafahako mitazona ny toerako eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny fanekena sy ny fanentanana dia manampy ny orinasako, saingy tsy miteraka karama bebe kokoa noho ny fotoana sy ny fandaniana amin'ny famokarana atiny famoronana sy ny media sosialy. Heck, tsy ho hitanao intsony intsony ny horonantsary avy amiko. Ary eny… azonao atao ny mitsikera ny fanatrehako an-tserasera tontolo andro… ary mahita taonina iray azo hatsaraina na vita tsara kokoa.
Saingy rehefa afaka 11 taona teo amin'ny asa aman-draharaha, dia holazaiko anao ity… Afaka niteny tamin'ny hetsika rehetra aho, nanjary teo amin'ny lisitry ny varotra rehetra, nitazona ny hatezerana isaky ny haino aman-jery sosialy, ary nanoratra lahatsoratra bilaogy roa mahavariana iray isan'andro… ary tsy tonga akory izany manakaiky ny fampifangaroana ny vola azoko tambajotra ary teny vava. Nandany vola, ezaka ary fotoana be dia be tamin'ny olona ao amin'ny orinasa aho mba hamolavolana, hivelarana ary hamokarana atiny mahatalanjona ary - raha nahasarika ahy izany dia tsy nandoa ny faktiora izany. Izaho dia nanana mpamorona maharitra, mpanoratra atiny, mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy ary mpanao horonantsary manao asa mahatalanjona ho ahy. Tsy mandeha izany. Fe-potoana.
Izay mety amiko
The vokatra fa afaka mahatratra ny mpanjifako aho, ny kalitao ny vokatry ny asa, ny sarobidy momba an'io asa io, ary ny teny naloaky ny vava nomen'izy ireo ny orinasako dia nanjary rehetra fifampiraharahana lehibe nananan'ny orinasako.
Tsy misy zavatra hafa akaiky mihitsy. Na inona na inona.
Noho izany, ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifako dia nanoro hevitra ahy aho ny amin'ny tsy hampiasanao vola be amin'ny paikady sosialy sy paikadim-batana. Marina izany… nolazaiko izany.
Nanana fanombohana tanora aho izay nahatratra ireo mpanao hatsaran-tarehy. Hainao? Eo an-tongotr'izy ireo ny mpanao hatsarana tontolo andro manandrana mivelona. Tsy namaky lahatsoratra na fanavaozana ny haino aman-jery sosialy… fa namono ny ba nataony ry zareo. Na izany aza, ireo mpanao hatsaran-tarehy mahomby ireo dia tena maka fotoana be hankanesana any amin'ny fihaonambe hijerena ireo teknolojia farany. Niresaka tamin'izy ireo izahay fa tsy handany vola amiko ary nasainay nanao fihaonambe bebe kokoa! Ary niasa.
Ny orinasako eo an-toerana dia mahavita zavatra tsara amin'ny alàlan'ny fanatonana ny mpanjifa sy ny fangatahana naoty na fanamarihana toy izay mandray anjara amin'ny media sosialy sy manosika atiny. Noho izany, nanorina faritany voafetra izahay tranomboky atiny mifototra amin'ny fizaran-taona ary manohy manatsara ny lahatsoratr'izy ireo izay voalahatra sy atomboka indray amin'ny alàlan'ny bilaogin'izy ireo sy ny media sosialy. Hitako ny fitomboan'ny tarehimarika roa ho an'ireo orinasa roa izay nanaovanay izany tamin'ny alàlan'ny fivezivezena motera fikarohana. Tsy misy atiny vaovao, tsy misy fisian'ny media sosialy mandritra ny fotoana feno… toro-làlana toro-hevitra mahomby miaraka amin'ny ezaka hafa rehetra mankany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fifandraisan'ny tena manokana.
Manana orinasa iray hafa aho izay mijery ny fanavaozana ny toetr'andro, avy eo mamaky ny faritra misy ny tafio-drivotra hanao fizahana maimaimpoana. Fantatrao izay mandeha tsara kokoa noho ny media sosialy sy ny marketing amin'ny atiny ho azy ireo? Hangar varavarana. Fandoavana vola be.
Manana fanombohana teknolojia vao manomboka aho izay noana tsy hanan-karena ary tsy misy mihitsy fomba fandresena ireo mpifaninana marobe amin'ny tsenany izay mandany olona an-tapitrisany sy manana ekipa olona. Raha tokony handany fotoana amin'ny andalana famokarana atiny sy sosialy izahay dia mandany iray volana… indraindray bebe kokoa… amin'ny famokarana sy fampiroboroboana atiny tokana. Hainao? Miasa izy io. Nozaraina sy hita io atiny io ary nahatonga MQL maro kokoa noho ny paikady hafa.
Manana orinasa teknolojia tena mahomby aho izay ekena eran'izao tontolo izao ny mpitarika ao amin'ny indostrian'izy ireo ho an'ny fanavaozana. Niasa mafy izahay tamin'ny atiny tsy mampino izay nozaraina tamina taonina tao amin'ny indostria. Fantatrao izay nanao tsaratsara kokoa? bokikely nanoratra ho ho an'ny mpanatanteraka. Nahoana? Satria raha nikaroka an-tserasera sy nahalala momba ilay orinasa ny mpiasan'izy ireo, dia niara-niasa tamin'ny mpiara-miasa sy kickback izy ireo mba tsy hahazo ny hafatra eo imason'ireo mpanapa-kevitra. Nandinika ny lohan'izy ireo izahay ary niasa.
Manana orinasa hafa aho izay saika tsy misy eo amin'ny fiaraha-monina na ny atiny an-tserasera. Fa kosa, mampiasa vola be amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa izy ireo ary manohana ny mpiasa ary mahatalanjona ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Tsy dia mitovy amin'ny Zappos or Apple… Manao traikefa amin'ny mpanjifa izay mahavariana tokoa izy ireo, hany ka lasa mpisolo vava ny mpanjifa. Mahamenatra ve ianao ireo orinasa?
Niara-niasa tamin'ny indostria voafehy mafy izay TSY afaka manakaiky ny fizarana atiny an-tserasera momba ny indostrian'izy ireo, ny haitao misy azy ireo, na ny mpanjifany aza. Fe-potoana. Noterena hampiasa paikady hafa izahay hanentanana ny fanentanana, ny fahazoana ary ny fitazonana azy. Ho an'ny mpanjifa iray dia namolavola rindranasa finday izahay izay hanampy ny ekipan'ny mpikaroka amin'ny kajy sy fanovana sarotra. Nety tsara ilay izy.
Izaho dia nahita orinasam-teknolojia izay nahazo fanamarihana avy amin'i Forrester sy Gartner nahatratra fitarihana sy fikatonana bebe kokoa noho ny herintaona famokarana sosialy sy atiny. Tsapako fa mbola mionona ihany izany… fa aleo hiatrika izany… ny fananganana laza sy fifandraisana amin'ny ankamaroan'ny mpandalina izay hahazoanao izany karazana fanonona izany. Halako ny mampahafantatra vaovao, fa tsy ny mpandalina rehetra no miandry ny bitsika na ny bilaoginao manaraka.
Manana orinasa iray hafa aho izay nampiakatra avo roa heny ny orinasany miaraka amina tranokala mahatsiravina, tsy misy fahitana amin'ny fikarohana, tsy misy atiny ary tsy misy paikadin'ny media sosialy - ary hikoropaka ianao amin'ny fomba ahoana. Mahazo fitarihana avy amin'ireo orinasa mpiara-miasa izy ireo, miantso ny vinavinan'antoka mangatsiaka ary orinasa marobe. Ny iray amin'ireo mpivarotra ivelany miasa any dia nanidy $ 8 tapitrisa tamin'ny asa aman-draharaha tamin'ny taon-dasa. Tsy misy antso mangatsiaka.
Alohan'ny hanipazanao ahy any amin'ny liona, mazava ho azy fa tsy milaza izany eo amin'ny fiaraha-monina sy ny atiny aho dia tsy miasa… fa tsy a Ny habe dia iray vahaolana.
Tetibola, fandaharam-potoana, fifaninanana, fotoana, loharano, indostria… ireo zavatra rehetra ireo dia mila dinihina raha mahomby na tsia ny paikadin'ny media sosialy sy ny atiny ho an'ny orinasanao.
Mahita orinasa maro aho manova loharano avy amin'ny haino aman-jery sosialy ka hatramin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, manomboka amin'ny famokarana atiny mankany amin'ny kaonferansa, tohanana, marketing amin'ny influencer ary paikady hafa. Anjarany ary manao izay norefesiny sy hitany izy ireo.
Tsy ny orinasa rehetra no afaka mandresy ny media sosialy na manoratra atiny mahatalanjona. Ajanony ny orinasa mahamenatra rehefa mifindra amin'ny paikady izay mety aminy kokoa izy ireo.
Angamba ny tena manelingelina ahy indrindra dia ny olona izay mahamenatra voalohany ireo orinasa ireo dia ny vahoaka fivarotana haino aman-jery sosialy sy paikadin'ny atiny ary TSY MISY fahitana momba ny orinasa sy ny fomba fiasany. Tena tsy tompon'andraikitra izany… manafika izay manohitra ny fomba rehetra ianao ianao mahazo vola.
Raha tokony hanala baraka ireo orinasa ianao dia mandehana mitady orinasa azonao amidy ny serivisinao izay mila ny fanampianao ary afaka manisy fiovana.
Tsy izany rehetra izany.
Atsaharo ny orinasa mahamenatra.